Etu esi eji PC abuo nwere ihe ngosi (HDMI switcher) 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ọ bụrụ na anyị na kọmputa na-arụ ọrụ ọtụtụ, na-arụzi, na-arụ ụlọ ahịa kọmputa, ma ọ bụ dee isiokwu isiokwu na blọgụ nke onwe anyị, ọ nwere ike ime na anyị nwere desktọọpụ abụọ na otu igwe nyocha iji rụọ ọrụ na ha abụọ. N’ọnọdụ a, anaghị atụ aro ka ị jiri otu eriri HDMI wee bugharịa ya n’otu kọmputa gaa na nke ọzọ dịka ọ dị mkpa dịka ọdụ ụgbọ mmiri HDMI anaghị adị mfe mgbe niile, yana ịme ka ọ daa mba iji kọmputa abụọ n’otu oge. Dịka ezigbo ndị ọkachamara IT, anyị nwere ike ịkụ nzọ na nke dị mma HDMI oyiri duplicator O HDMI mgba ọkụ, nke nwere ike ijikwa iyi abụọ / vidiyo dị iche iche na izipu ha na naanị nyocha anyị nwere, jiri aka na-ahọrọ kọmputa nke ga-ebute ụzọ na ihuenyo dabere na ihe anyị ga-eme n'oge ahụ.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị ga-egosi gị otu esi akwado komputa abuo iji kesaa otu ileba anya, jiri nlezianya na-ahọrọ eriri 3 HDMI iji mee ihe na nke ịgbanwee iji n'etiti ụdị ndị dị na Amazon. N'akụkụ nke raara onwe ya nye anyị ga-ahụkwa otu esi eji switches USB, iji nwee ike ibugharị ngwaọrụ ntinye anyị (keyboard na òké) site na otu kọmputa gaa na nke ọzọ n'ụzọ dị mfe.
G ALKWUO: Jikwaa ihe nlere abụọ na PC desktọọpụ agbatị
Etu esi eji PC abuo nwere ihe nlere
Iji mepụta ebe a na-ekerịta, o doro anya na anyị ga-enwe otu ileba anya, PC abụọ edozi ma ọ bụ kọmputa abụọ nke ụdị ọ bụla (ọbụlagodi PC na laptọọpụ ma ọ bụ PC na Mac Mini), eriri atọ HDMI nke ogologo kwesịrị ekwesị na ntụgharị. HDMI nwere ike ijikwa iyi HDMI abụọ nwere onwe ha ma mepụta otu mmepụta, nke ga-erute ọdụ ụgbọ mmiri HDMI ahụ nyocha. Ọ bụrụ na anyị azụtabeghị kọmputa ọhụrụ, anyị na-atụ aro ka ị gụọ atụmatụ na usoro niile dị na ntuziaka anyị Ihe ịmara tupu ịzụta kọmputa ọhụrụ.
Họrọ eriri HDMI kwesịrị ekwesị
Maka nhazi a, anyị ga-achọ eriri HDMI atọ: otu maka kọmputa anyị ga-amata dị ka "PC 1", ọzọ maka kọmputa anyị ga - akpọ "PC 2" na n'ikpeazụ eriri HDMI ikpeazụ, nke ga - ejikọ mmepụta HDMI nke ihe ntụgharị ahọpụtara gaa na nyocha anyị. .
Ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye mgba ọkụ na desktọọpụ, eriri abụọ ahụ maka PC 1 na PC 2 ga-ezu oke (ọ dịkarịa ala mita 1,8), iji kpuchie ebe dị n'etiti PC ọdịnala abụọ. N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke eriri HDMI kwesịrị ekwesị maka nzube a.
USB Rankie High Speed ​​HDMI, Naịlọn Kwụrụ, 1,8m (€ 6)
4K HDMI USB 2 mita SUCCESO (€ 7)
Iji jikọọ mgba ọkụ na ileba anya na anyị nwere ike iji obere USB (1 mita ma ọ bụ ihe na-erughị ya), iji weghara ohere dịkarịsịrị mfe na tebụl ahụ, na-etinye ihe ntụgharị ahụ kpọmkwem n'okpuru nyocha (ma ọ bụ na ntọala ya). N’okpuru, anyị nwere ike ịchọta usoro nke obere HDMI.
IBRA Cavo HDMI 4K Ultra HD 1M (€ 8) Nkọwapụta
O doro anya na anyị nwere nnwere onwe zuru ezu nke nhazi: anyị nwere ike ịhọrọ eriri atọ dị ogologo, eriri abụọ dị mkpirikpi na otu ogologo ma ọ bụ ọbụna eriri atọ dị mkpirikpi, dabere na ọnọdụ na oke nke kọmputa ndị a ga-ejikọ. Naanị ihe dị mkpa bụ nweta ezi HDMI atọ dị mma tupu ịga n'ihu na ndị ndu ndị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị amaghị acronyms ndị na-eso eriri USB HDMI, anyị na-akwado ka ị gụọ nyocha miri emi anyị Etu ịhọrọ eriri HDMI kwesịrị ekwesị.
Họrọ ezigbo mgbanwe HDMI
Mgbe anyị hụrụ eriri HDMI iji, anyị bịara na ngwaọrụ ahụ nke na-enye gị ohere ịgbanwe isi iyi vidiyo n'etiti kọmputa abụọ site na ịpị bọtịnụ: gbanwee HDMI.
Obere ngwaọrụ a na-enye gị ohere jikọọ eriri abụọ HDMI dị ka ntinye ma nye otu mmepụta HDMI (mgbapụta), nke a ga-eziga na ileba anya. Ka ịgbanwee site na PC gaa na nke ọzọ, naanị ihe anyị ga - eme bụ pịa ya Mgba ọkụ bọtịnụ nke dị n'elu (na-esokarị ndị ọkụ abụọ na-enwu gbaa iji mata ngwa ngwa na-arụ ọrụ), iji gbanwee n'etiti PC ejikọrọ abụọ wee gosipụta naanị vidiyo site na kọmputa achọrọ na ileba anya. N’okpuru, anyị anakọtara ndị kacha mma HDMI switches ị nwere ike ịzụta n’aka Amazon n’ọnụ ahịa asọmpi.
Techole Gbanye HDMI Bidirezionale (€ 9)
GANA Aluminom Bidirectional HDMI Gbanye (€ 11)
Techole HDMI mgba ọkụ (€ 12)
Mgbe anyị zụtara otu n'ime ngwaọrụ ndị a, ka anyị hụ na ha dị ka bidirectional HDMI switches ma ọ bụ na ha na-akwado "Ntinye 2 ntinye-1"Ma ọ bụghị ya, anyị na-agba ọsọ n'ihe ize ndụ nke ịzụta ngwaọrụ yiri ya ma nke ukwuu dị kaHDMI splitter, nke na-enye ohere ka nlekota abụọ jikọọ na PC ahụ (ọnọdụ dị iche iche nke anyị si dabere na ndu ahụ dum).
Ugbu a na anyị nwere ihe niile anyị chọrọ iji jikọọ kọmpụta anyị abụọ na otu nyocha anyị nwere ike ịga n'ihu na ntọala ikpeazụ: jikọọ eriri HDMI na splitter, nyochaa na kọmpụta, gbanye ihe nyocha ahụ, ma gbanye otu kọmputa abụọ (ma ọ bụ abụọ): ihe ngbanwe HDMI ga-agbanye onwe ya site na iji nke ugbu a site na eriri HDMI na site na ịpị bọtịnụ anyị nwere ike ịhọrọ ma lee vidiyo ahụ na PC 1 ma ọ bụ PC 2; nke mere na ihe niile ejikọrọ karịa anyị nwekwara ike ịgbaso usoro nke ndu anyị Otu òké na ahụ ike ijikwa kọmputa abụọ ma ọ bụ karịa, nke mere na ị nwere ike ịkekọrịta oke na keyboard n'etiti kọmputa abụọ ahụ (n'eziokwu, anyị ga-enwe ngbanwe abụọ, otu HDMI na otu USB). Enwere ike iji HDMI switcher jikọọ abụọ consoles na telivishọn O nwere otu ọdụ ụgbọ mmiri HDMI, yabụ ị ga - erite uru nke abụọ na - enweghị ịgbanwe TV (ụgwọ dị oke ọnụ karịa).
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji nyochaa abụọ n'akụkụ n'otu kọmputa ahụ, na-eji ọdụ ụgbọ mmiri HDMI nke kaadị vidiyo raara onwe ya nye, anyị na-akwado ka ị gụọ ntuziaka anyị. Otu esi ejikọta kọntaktị abụọ na PC mi Nhazi ihuenyo abuo na Windows 10 iji rụọ ọrụ na nlekota abụọ.
Ọ bụrụ na ihe nlele anyị nwere enweghị ọdụ ụgbọ mmiri HDMI, ọ bụ oge ịgbanwe ya maka nke na-adịbeghị anya, na-ahọrọ n'etiti ụdị a hụrụ na ntuziaka anyị. Ndị nlekota PC kachasị mma ịzụta n'etiti 100 na 200 Euro mi Zụta 21: 9 Wide Monitor (Ultra Wide Screen).
Otu esi emepụta Server Mbipụta Office
Etu esi akwado ịba uru na BIOS, maka igwe na-ahụ maka ngwa ngwa
Esi edozi BSOD error (0xc00000e) na Windows 10